I-Sandpiper ~ I-Cottage ephambi kolwandle (ilungele izilwanyana) - I-Airbnb
I-Sandpiper ~ I-Cottage ephambi kolwandle (ilungele izilwanyana)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLulu
Indawo yaselunxwemeni yaseHolden Beach, amanyathelo nje ukusuka esantini namanzi. Yonwabela amahlengesi kunye neentaka zaselunxwemeni ukusuka kwirockers kwiveranda egqunyiweyo. Isitudiyo esipholileyo siye sahlaziywa ngophuculo olucingisisiweyo. Ikhitshi ligcwele ngokupheleleyo kubandakanya ikofu, iziqholo, kunye neprimiyamu yokupheka. Akukho zitephusi, indlela yokuhamba elunxwemeni ekumgangatho osezantsi, kunye neyadi ebiyelwe ngokupheleleyo ilungele abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya (imali yesilwanyana sasekhaya iqokelelwe ngokwahlukeneyo). Zininzi izinto eziluncedo kunye nezinto zaselwandle zibonelelwa ukuze uthuthuzele kwaye ube lula.
Le yistudiyo esitofotofo, sq sq ft nesakhiwo esivulekileyo, esifanele umntu omnye, isibini, okanye intsapho eneentsana, (akukho zitepsi!). Kulala abantu abayi-4 kunye nebhedi enkulu kunye nesofa enkulu. Ukuze uhlale kamnandi sicebisa ukuba ungabi ngaphezu kwabantu abadala ababini kunye nomntwana omnye okanye ababini abancinci. Inxalenye enye ye-duplex, yeyabucala kwaye yahlukile kwenye iyunithi. Icala ngalinye lineyadi yalo eyahlukileyo. IG @ beachnestrentals ukuze ufumane iifoto ezingakumbi.
Ikhitshi linezinto zokupheka ezisemgangathweni, izinto zokwenza ikofu (i-drip, i-french press, kunye nesitovu esiphezulu se-espresso), izixhobo, iziqholo, iioyile, izinto zokupheka, ikofu, iti nokunye. Akukho Keurig.
Izinto ezifumanekayo ziquka: ubushushu obulawulwa ngumgangatho wegumbi lokuhlambela, i-AC/heater, i-smart TV ene-cable kunye ne-DVD player, iiplagi zombane ecaleni kwebhedi enamaziko ayi-2, ifeni esesilingini elawulwa kude, i-steamer, i-french press, umatshini wokwenza ikofu we-4-cup drip, umatshini wokwenza isitovu we-espresso, i-kitchenAid blender, i-Crock-Pot, isepha/i-lotion/i-shampoo/i-conditioner, umatrasi owenziwe nge-hypoallergenic kunye nezinto zokogquma imiqamelo, amashiti neetawuli ezinemiqamelo eyongezelelweyo kunye neengubo, ibhafu, ishawa yangaphandle enamanzi ashushu (kumacala omabini), iyadi encinci ebiyelweyo.
Nceda usazise kwangaphambili ukuba uza kudinga amashiti esofa etsalwayo (imali eyongezelelekileyo).
Izixhobo zaselwandle ezikhoyo: iitawuli zaselwandle, izitulo zaselwandle, iibhodi zokuhlamba umzimba, izinto zokupholisa, izinto zokudlala. Ifumaneka xa icelwa ngesaziso esiphambili: iambrela kunye neentlanzi.
Siyazamkela izilwanyana zakho zasekhaya! Nceda uchaze zonke izilwanyana zasekhaya ngaphambi kokuba zifike. Akukho mda wobunzima okanye izithintelo zokuzalana. Imali engabuyiselwayo yezilwanyana zasekhaya eqokelelwa zodwa kwaye imele ibhatalwe ngaphambi kokungena; i- $ 100 (+irhafu ukuba ikhona) kwizilwanyana zasekhaya ezimbini zokuqala, i- $ 100 (+ irhafu ukuba ikhona) kwizilwanyana zasekhaya ezongezelelekileyo ezine. Izilwanyana zasekhaya ezimanzi zimele zomiswe ngaphambi kokuba zingene ngaphakathi. Iyadi ibiyelwe ngokupheleleyo.
Izinto ezinokusetyenziswa ezisetyenziswa nangabanye abantu yishawa ephandle, izinto zokudlala zaselwandle kunye nendlela yokuhamba elwandle.
4.97 · Izimvo eziyi-159
I-Holden Beach lolona khetho lufanelekileyo lokuphumla elunxwemeni. Yaziwa njenge "The Family Beach," ikhupha umtsalane wasemazantsi kunye nokufudumala, ukungaqhelekanga, i-vibe yobuhlobo. Isiqithi sikunqande ukuthengisa ngelixa sinikezela ngeendawo zokutyela ezininzi kunye nokutya okongeziweyo kunye nokhetho lokuthenga ngaphaya kwebhulorho. Njengedolophu yamaxesha onyaka, iindawo ezininzi ezisetyenzisiweyo ziyavalwa ngexesha lasebusika, (biza ngaphambili!), okukhokelela kumoya ozolileyo nowoxolo. Yiza kumava e-Holden Beach ngokwakho kwaye ubone ukuba kutheni abantu abaninzi bebuya unyaka nonyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Lulu
Nceda usithumele umyalezo ukuba kukho nantoni na oyifunayo okanye ukuba kukho into efuna ukulungiswa!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Holden Beach